CEO Business & Management Magazine » 2017 » September » 15
Myanmar Insight 2017 အကြိုစာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံသံရုံးမှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ပွဲမှာ ထိုင်းနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး Jukr Boon-Long က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး Jukr Boon-...
Cleaning Express Self-Service Laundromat
ရည်ရွယ်ချက် . . . လူနေမှုဘ၀တိုးတက်လာတဲ့ မိသားစုတွေ၊ အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ အချိန်ရှားပါးတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ လျှော်ဖွတ်သန့်စင်ခြင်း လိုအပ်ချက်တွေကို ပံ့ပိုးပေးဖို့ ရည်ရွယ်တည်ထောင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အ၀တ်အထည်တွေကို Outlet ကို ယူဆောင်လာပြီး Wa...
ဆိုင်တည်နေရာ . . . ရန်ကုန်မြို့ ၁၉၂ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ မြန်မာပလာဇာလေးလွှာမှာတည်ရှိပြီး ဆက်သွယ်ရမယ့် ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ ၀၉-၉၆၆၆၆၃၁၈၉၊ ၀၉-၉၆၆၆၆၁၃၈၉ ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ အင်တာနက်စာမျက်နှာကတော့ Power House Fitness Club ကို ရိုက်နှိပ်ကြည့်ရူနိုင်ပါ...